नेटफ्लिक्स बनाम डिस्ने प्लस - कुन स्ट्रिमिंग सेवा उत्तम छ? - मनोरञ्जन
त्यहाँ कमैले मात्र फिल्महरू, टिभी श्रृ series्खला, वा कार्यक्रमहरू मन पराउँदैनन्। केहिलाई यसको लत लाग्छ, कोहीले यसलाई केवल मनोरन्जनको लागि हेर्छन्। धेरै अनुप्रयोगहरूले उत्कृष्ट चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै नेटफ्लिक्स, हटस्टार, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, र अधिक। प्रत्येक व्यक्तिसँग उनीहरूको आफ्नै छनौटहरू हुन्छन् शो वा चलचित्रका प्रकारहरू अनुसार उनीहरू हेर्न।
सबै अनुप्रयोगहरूको सबैभन्दा ट्रेंडिंग नेटफ्लिक्स र डिज्नी प्लस हो। जे होस्, ती मध्ये प्रत्येकसँग यसको सामग्री छ र यसको दर्शकहरू छन्। पहिले, डिज्नी प्लस र नेटफ्लिक्स सँगै काम गर्थे, जहाँ डिज्नी प्लसले नेटफ्लिक्सलाई यसका केही मौलिक कार्यक्रमहरू र चलचित्रहरू अनुप्रयोगमा प्रसारण गर्न अनुमति दियो। यद्यपि, अब यी दुई अनुप्रयोगहरूको आफ्नै वास्तविक उत्पत्ति छ र सँगै काम गर्दैन।
तपाई जुन धेरै सिनेमा र टिभी कार्यक्रमहरूको लागि उत्तम अनुप्रयोग हुने बारेमा अलमल हुनुपर्दछ; त्यसो भए तपाईले दुबै नेटफ्लिक्स र डिज्नी प्लसको उनीहरूको सदस्यता, कार्यक्रमका प्रकारहरू, आजको विश्व, र अधिकको बारेमा विस्तृत जानकारी जान्न आवश्यक छ। त्यसकारण, यस लेखमा हामी तपाईंलाई दुई अनुप्रयोगहरूको बिचमा विस्तृत तुलना दिनेछौं, जुन तपाईंलाई निर्णय दिन्छ जुन तपाईंलाई उत्तम छ।
अधिक तुलना गाइडहरू:
गोफन टिभी बनाम युट्युब टिभी
Hulu बनाम गोफन टिभी
नेटफ्लिक्स बनाम डिस्ने प्लस - विस्तृत तुलना
दुबै नेटफ्लिक्स र डिज्नी प्लस मध्ये एक हो लोकप्रिय टिभी स्ट्रिमि services सेवाहरू , र तपाईं धेरै को सदस्यता शुल्क हुनु पर्छ। विधाबाट सुरु हुन्छ वा नेटफ्लिक्स र डिज्नी प्लसमा टिभी कार्यक्रमको सामग्रीको साथ, दुबै बिभिन्न विधाहरू छन्। जबकि नेटफ्लिक्सले मुख्य रूपमा क्लासिक सामग्रीसँग डिल गर्दछ, डिज्नी प्लसमा कार्यक्रमहरू परिवार-मैत्री सामग्रीमा केन्द्रित हुन्छन्। डिज्नी प्लस धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ, मार्वल शो जस्तै धेरै टिभी शो नेटफ्लिक्स बाट हटाईएको छ। उही समयमा, नेटफ्लिक्सले यसको मूल उत्पादनमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ र यसका अन्य अंशहरू जस्तै स्ट्र्यान्जर थिंग्स, F.R.I.E.N.D.S यसको एक हिस्साको रूपमा छ। अब हामी दुबै बिभिन्न सुविधाहरुको तुलना गरौं।
नेटफ्लिक्सको तुलनामा डिज्नी प्लसको सदस्यता शुल्क कम छ। डिज्नी प्लस $ 6.99 मा मासिक सदस्यता। यसबाहेक, वार्षिक सदस्यता। 69.99 छ। यी डिज्नी प्लस को आधारभूत योजना को रूप मा मानिन्छ। अर्कोतर्फ, नेटफ्लिक्ससँग तीन फरक सदस्यता योजनाहरू छन्: बेसिक योजना, प्रीमियम योजना, र मानक योजनाहरू। यी योजनाहरु को अतिरिक्त सुविधाहरु छन्।
मानक योजनाले प्रयोगकर्तालाई दुईवटा स्क्रीन सम्मको HD क्वालिटी अनुभव गर्न सक्षम गर्दछ। जबकि प्रीमियम योजनाले प्रयोगकर्तालाई टिभी कार्यक्रम र चलचित्रहरू हेर्नको लागि HD गुणमा scre स्क्रीन सम्म अनुमति दिन्छ। अत्यावश्यक योजना प्रति महिना $ 99.99। को लागी खर्च हुन सक्छ, मानक एक महिनाको बारेमा १ about.99। डलर खर्च हुन सक्छ, र अन्तमा, प्रीमियम योजना लगभग $ १..9999 छ।
विधा र सामग्री
हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौं, दुई टिभी स्ट्रिमि applications अनुप्रयोगहरूको सामग्री र विधा भिन्न छन्। डिज्नी प्लससँग एक छ टिभी कार्यक्रम र चलचित्रहरूको बिभिन्न सेट । तपाईंले केहि लोकप्रिय फिल्महरू र श्रृंखलाहरू भेट्टाउनुहुनेछ जस्तै स्टार वार्स, मार्वल चलचित्रहरू, र अधिक। यसका साथसाथै यसको प्लेटफर्ममा यसको केही मूल सामग्री छ, जसले यसलाई धेरैको प्राथमिकता बनाउँदछ। अर्कोतर्फ, नेटफ्लिक्सले आफ्ना दर्शकहरूलाई F.R.I.E.N.D.S, Office, र अधिक धेरै क्लासिक शोको सम्पूर्ण गुच्छा प्रस्तुत गर्दछ।
योसँग यसको मूल सामग्रीको बन्डल पनि छ, र तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्समा धेरै मौलिक कार्यक्रमहरू , कुन राम्रो गुणको र राम्रो र अद्वितीय सामग्री छ। यदि तपाईं मौलिकहरू भन्दा हिट शो वा चलचित्रहरूको अधिक शौकमा हुनुहुन्छ भने, डिज्नी प्लस तपाईंको प्लेटफर्म हो। जबकि यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ जो नियमित रूपमा अनुपम सामग्रीको लागि चाहन्छ, तब नेटफ्लिक्स एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
सुविधाहरू र उपलब्धता
दुबै डिस्ने प्लस र नेटफ्लिक्स एन्ड्रोइड, आईओएस, फायरस्टिक्स, क्रोमकास्ट उपकरणहरू, र निजी कम्प्युटर वा ल्यापटपहरूमा जस्ता धेरै प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छन्; तपाईं यी दुई अनलाईन स्ट्रिमि distin सेवाहरू अलग ब्राउजरहरूको माध्यमबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। चार देशहरू बाहेक, चीन, उत्तर कोरिया, क्राइमिया, र सिरिया, नेटफ्लिक्स १ 190 ० देशहरूमा उपलब्ध छ । अर्कोतर्फ, मात्र केहि देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड नेदरल्याण्ड, र अन्य।
डिज्नी प्लससँग अधिक पारिवारिक मैत्री कार्यक्रमहरू र यसको मूल सामग्री कम छ। जे होस्, यसको सब भन्दा महत्वपूर्ण फाइदा भनेको मार्वल, पिक्सर, र स्टार वार्सको केहि उत्कृष्ट र उच्च मूल्या rated्कन गरिएको कार्यक्रम हो, जुन प्रायः व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछ। यसबाहेक, यससँग सात प्रयोगकर्ता प्रोफाइलहरू छन्, जुन नेटफ्लिक्सको भन्दा अलि बढी छ, जससँग केवल पाँच प्रयोगकर्ता प्रोफाइलहरू छन्। डिज्नी प्लसको विपरित, नेटफ्लिक्सको सबैभन्दा लोकप्रिय टिभी कार्यक्रमहरूमा पहुँच नहुन सक्छ, तर यसको मौलिक सामग्री छ, जसले प्राय: मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
दुबैको इन्टरफेसमा आउँदैछ, तिनीहरू मध्ये प्रत्येकसँग यसको अनौंठो इन्टरफेस छ। डिज्नी प्लससँग यसको सामग्री क्षैतिज पows्क्तिहरूमा जम्बल अप बान्कीमा प्रदर्शित छ। यसले तपाईंलाई सामग्रीहरू वा शोहरू पनि देखाउँदछ जुन तपाईंलाई चासो लाग्दछ। यसका साथै मार्भल, पिक्सार, नेशनल जियोग्राफिक र स्टार वारहरूमा पहुँच भएको कारण प्रत्येकका लागि छुट्टै बटनहरू सिर्जना गरिन्छ। अर्कोतर्फ, नेटफ्लिक्ससँग यसको सामग्री थ्रिलर, कमेडी, वा रोमान्टिक जस्ता विभिन्न विधाहरूको अनुसार संगठित छ। तपाइँ तपाइँको मनपर्ने अनुसार कुनै पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ।
दुबै नेटफ्लिक्स र डिज्नी प्लससँग यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गर्नको लागि केहि रोचक छ। उहि समयमा, डिज्नी प्लस अझै पनि अधिक र अधिक अनौंठो शोहरू र अन्य उपयोगी सामग्रीको साथ आउँदैछ। अर्कोतर्फ, नेटफ्लिक्स अलि उन्नत छ र यसको सामग्रीको साथ एक कदम अगाडी छ। जे होस्, डिस्ने प्लससँग यसको प्रयोगकर्तालाई बनाउने राम्रो प्रस्ताव छ जब यो सदस्यताहरूको लागि आउँदछ, जबकि नेटफ्लिक्स जेबमा थोरै भारी हुन सक्छ। यसबाहेक, डिज्नी प्लससँग बच्चाहरूदेखि वयस्कहरू सबै उमेर समूहहरूको लागि टिभी कार्यक्रम हुन्छ। यद्यपि नेटफ्लिक्सको साथमा यस्तो अवस्था छैन, जसले अधिक किशोर र वयस्कहरूलाई चासो लिन सक्छ।
नेटफ्लिक्स बनाम Hulu
नेटफ्लिक्समा १० सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्रहरू
के AliExpress लेगिट हो? विस्तृत समीक्षा
कसरी YouTube प्रीमियम विद्यार्थी छुट छ?
विन्डोज १० को लागी जुम गर्नुहोस् - डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने?
आईफोन ११ प्रो अधिकतम मोडल संख्या (A2161, A2218, A2220)
२१+ उत्तम सबडर्डिट्स तपाईंले अनुसरण गर्नुपर्छ (२०२०)
Hulu मा के हेर्ने? परम संग्रह (२०२०)
थिएटर अनलाइन बाट फिल्महरू हेर्नुहोस्
म नि: शुल्क अनलाइन कहाँ नयाँ फिल्महरू हेर्न सक्दछु
टिभी कार्यक्रम र फिल्म अनलाइन
अनलाइन निःशुल्क फिल्महरू कहाँ पाउन सकिन्छ
अनलाइन निःशुल्क मा फिल्म हेर्नुहोस्
कम्प्युटरमा पिट्नको लागि अनुप्रयोगहरू